London oo lagaga dhawaaqay xisbi Siyaasadeed cusub (Sawiro) – Radio Daljir
Abriil 26, 2019 10:21 b 0
Magaalada London ee caasumada wadanka Britain ayaa waxaa lagu shaaaciyey xisbi cusub oo siyaasadeed oo loogu magac daray “Xisbiga Wadaniga Soomaaliyeed”. Xisbigan waxaa dhisay siyaasiyiin caan ka ah Soomaaliya, ganacsato iyo aqoonyahanno kala duwan.
Dr. Siciid Faarax Xassan oo ah gudoomiyaha Xisbiga Wadaniga Soomaaliyeed oo ka hadlayey xaflada lagu shaacinayey urur siyaasadeed kaan ayaa sheegay inuu xisbigaan yahay xisbi umada Soomaaliyeed Soomaaliyeed dhan ka dhaxeeya, una furan yahay CID walba oo Soomaali ah, wuxuuna Gudoomiyuhu sheegay in xisbigan uu ka shaqeyn doono sidii xal loogu heli lahaa colaadda muddada dheeraatay ee ka aloosan dalka Soomaaliya, dib u heshiisiin rasmiya iyo dimuqraadiyad.
Dr. Siciid Faarax Xassan, wuxuu sheegay in xisbigan uu wakiillo ku leeyahay gobollo kale duwan oo ka tirsan guud ahaan Soomaaliya, ayna balaarin doonaan xafiisyada iyo shaqaalaha xisbiga.
Xisbigaan ayaa waxaa gudoomiye kuxigeen waxaa loo doortay aqoonyahan Marwo Safiyo Nuur Xassan, halka xoghayaha guud ee xisbiga loo doortay Mahad Yuusuf Cusmaan.
Xafladda lagu daah furayey xisbigaan cusub ayaa waxaa kasoo qayb galay dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Yurub, gaar ahaan wadanka Ingiriiska.
Waxaana xaflada ururkaan lagu daahfuray ka hadlay aqoonyahano, culimo, waxgarad, haween iyo dhallinyarro kala duwan oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed.
MAANHADAL: Khilaafka DFS iyo mucaaradka Nairobi ku shirsan (dhegayso)